Waqtiga Akhriska: 4 daqiiqo(Last Updated On: 24/07/2020)
Christmas Suuqyada by tareen kaa caawinaysaa in aad hesho galay ruuxa Christmas la safar mid ka mid ah magaalooyinka ugu fiican Yurub. Safarka tareen oo aad waayo-aragnimo ugu abid sixir! Dad badan oo saldhigyada ku yaalaan qalbiga bartamaha magaalada, samaynta safarka tareen habka ugu fudud ee ay u gaaraan meesha aad u socoto. Haddii aad u socotaan si ay u dukaameystaan ​​hadiyadaha qoyska, muunad ah khamri mulled ama si fudud u ku raaxaystaan ​​jawiga Christmas la kuwa aad jeceshahay, aad hubto in ay la ilaawi karin ah fasaxa. Waxaan soo ururiyey dhowr ka mid ah suuqyada ugu wanaagsan ee Christmas Europe ee tareen in aad u baahan doontaa in uu seegi.
U safraan sixray suuqyada Christmas tareen!! Berlin waa fudud loo heli karo by tareenka ee Europe taas oo ka dhigaysa waxay ku caga kaamil ah. Baro caasimada Jarmalka ee taariikhda hodanka ah oo soo jiidasho leh, iyo sidoo kale suuqyada Christmas kala duwan ay, la xilliyeedka fiican shopping, dhacdooyinka iyo badali lahaa!
Gendarmenmarkt waa a waa in uu arko! Mudanayaasha Tan waxaa loo aqoonsan yahay mid ka mid ah picturesque ugu suuqyada Christmas Berlin ee. Dhadhamiya qaar ka mid ah kuula dhaqmo degaanka sida Gingerbread, tallow dubay, khamriga iyo sausages mulled waayo kama dambaysta ah ee waayo-aragnimo Jarmal Christmas.
Isku day inaad feer ku delicious iyo macmacaanka dhaqanka sida aad eegto ka soo furin golaha ay hakad galeen, waayo, hadiyado iyo qurxinta, sidoo kale fiidkii buun kasta oo nool riwaayada waxaa lagu sameeyaa ka balakoonka Rathaus ah, tani waa hab fiican si loo soo afjaro maalin kaamil ah.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, ka dibna riix halkan: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/best-christmas-markets-by-train/ - (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)